Wasiir Xaabsade Oo Ka Hadlay Guul-darada Cali Galaydh Kala Kulmay Baarlamaanka Soomaaliya | Somaliland.Org
Axmed Cabdi Xaabsade oo xalay khadka telefoonka ugu waramay Wargeyska Dawan, isaga oo ku sugan Hargeysa, waxa uu sheegay in Cali Khaliif Galayd yahay nin khasaaray. Isaga oo ka hadlaya aragtisiisa guul darada Cali Galaydh Waxa uu yidhi “Wuu ku guul daraystay in uu noqdo guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, waxaan u arkaa in uu khasaaray oo uu halkana ka khasaaray halkaana ka khaaray”. md. Xaabsade waxa uu sheegay in u jeedadii uu markii hore Cali Galaydh ka lahaa asaasaaskii maamulkii fashimay ee Khaatumo Seeg ay ahayd sidii uu ugu gaadhi lahaa kursiga uu ka doonayay Soomaaliya balse ay taasi u suuro geli wayday.
“U jeedadiisii hore ee abuuritaankii khaatumo waxa uu ahaa in uu kursi ku raadsado, waanay cadayd taasi, waxaanu doonayay in uu ku meel gaadho maamulkii uu sameeyay, meeshiina way u suurtoobi wayday, imika waa nin khasaaray”. Ayuu yidhi Md Xaabsade. Cali Khaliif Galaydh Hoggaamiyihii kooxdii Khaatumo seeg, ayaa guul daro wayn iyo waji-gabax kala kulmay loolankii uu u galay in uu noqdo guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo shalay doorashadiisa la soo gabagabeeyay.
Waxaanu Cali Galaydh wareegii koowaad ee tartankaasi u cadaatay in uu ka codad badan yahay ninka ay wareega koowaad isugu soo hadheen ka dibna uu guul daradiisa aqoonsaday oo uu ka tanaasulay tartankaasi Cali Galaydh. Guddiga doorashada guddoonka baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in Prof. Maxamed Cismaan Jawaari uu si rasmi ah u noqday afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya kaddib markiii uu tanaasulay Cali Khaliif Galleydh oo ay isugu soo hadheen wareeggii ugu dambeeyay. Guddiga ayaa sheegay in Prof. Jawaari uu helay wareeggii koowaad 119 cod halkii laga doonayay 139 cod, balse tanaasulka uu sameeyay Prof. Galleydh ay sababtay inuu noqdo guddoomiyaha rasmiga ah ee baarlamaanka cusub Soomaaliya.
Previous PostMadaxweyne Siilaanyo oo xilkii ka qaaday Wasiirkii WarfaafintaNext PostXisbiga KULMIYE oo xaflad balaadhan u sameeyay siyaasiyiintii UDUB ka baxday	Blog